AvaTrade ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ဇွန်လ 2022- ပလပ်ဖောင်းအခကြေးငွေများ၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် စည်းမျဉ်းများ
AvaTrade ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပလက်ဖောင်းအခကြေးငွေ၊ ဖြန့်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စည်းမျဉ်း ၂၀၂၁
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 8 ဇွန်လ 2022
AvaTrade ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ AvaTrade 2006 ခုနှစ်ကတည်းက ဤနေရာတွင် ရှိနေခဲ့သည် - ၎င်းသည် ၎င်းကို အပြင်တွင်ရှိသော အသက်အကြီးဆုံး web-based ပွဲစားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာစေသည်။ ဘာသာစကားမျိုးစုံ ပံ့ပိုးမှု၊ ကျယ်ပြန့်သော ပလပ်ဖောင်းများနှင့် တစ်လလျှင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ပေါင် 60 ဘီလီယံ။ AvaTrade သည် ဆုရပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်သည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဤပွဲစားသည် အလျှော့မပေးသော တန်ဖိုးများနှင့် သမာဓိ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ရှိခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ သို့သော် ဤအွန်လိုင်းပွဲစားနှင့် လက်တွဲမဖြုတ်မီ သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ နောက်ထပ်မကြည့်ပါနှင့်။
AvaTrade ဆိုတာဘာလဲ၊ ငါတို့အရာအားလုံးအကြောင်းပြောကြမယ်။ အမျိုးမျိုးသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများ၊ ကိရိယာများ၊ အခကြေးငွေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် အခြားအရာများ။
AvaTrade သည် လွန်ခဲ့သော 16 နှစ်ကျော်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော AVA Group ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှတပါး, tသူ၏ပွဲစားသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော နိုင်ငံတကာ Forex ဖြစ်သည်။ CFD ကုန်သွယ် ပလက်ဖောင်း။
တရားမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါစေ။ န့် နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပညာရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ - ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ခိုင်မာသော client base 200,000 ကို တီထွင်ခဲ့သည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တစ်လလျှင် ရာထူး ၂ သန်းခန့်၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏသို့ ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
AvaTrade သည်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်တိုင်း၏ကုန်သည်များအပေါ်၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအလေးထားသည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များအားပြုပြင်နိုင်သောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအသုံးဝင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိရိယာများကိုပေးသည်။ ငါတို့သည်၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုနောက်ပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ပိုမိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့။ နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံ မှာတော့ မနည်းပါဘူး။ အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကို စာရင်းပြုစုထားသည်။ AvaTrade တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်-
Ava Capital Markets Australia Pty Ltd - မှ ASIC နံပါတ် ၁
အိုင်ယာလန်ဗဟိုဘဏ်မှ AVA Trade EU Ltd. (No.C53877)။
Ava Capital Markets Pty - တောင်အာဖရိကဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍကျင့်ဝတ်အာဏာပိုင် (FSCA No.45984) မှ။
BVI Financial Services Commission မှ Ava Trade Markets Ltd.
Ava Trade Japan KK – ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီ (လိုင်စင်နံပါတ်- 1662) ၊ Japan Financial Futures Association (လိုင်စင်အမှတ်- 1574) မှ။
Ava Trade East Middle Ltd - Abu Dhabi Global Markets (ADGM), Financial Regulatory Services Authority (FRSA) (No.190018) မှ။
DT Direct Investment Hub Ltd. သည် Cyprus Securities and Exchange Commission (No. 347/17) မှဖြစ်သည်။
AvaTrade ကိုထိန်းညှိသည့်ငါးနိုင်ငံအပြင်ပွဲစားသည် Dublin (ရုံးချုပ်)၊ မီလန်၊ ပါရီ၊ တိုကျို၊ ဆစ်ဒနီ၊ ဂျိုဟန်နက်စ်ဘာ့ဂ်၊ ပေကျင်း၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ ဆန်တီယာဂိုနှင့်မက်ဒရစ်တို့တွင်အရောင်းရုံးများရှိသည်။
မျှော်လင့်ချက်မဲ့ကုန်သည်များ၏အားသာချက်ကိုယူရန်ထိုနေရာတွင် cowboy ပွဲစားများစွာရှိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ AvaTrade သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသောယုံကြည်စိတ်ချရသောပွဲစားတစ် ဦး ၏တောက်ပသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပလပ်ဖောင်းသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အလွန်လေးစားစရာကောင်းပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် နာမည်ကောင်းရှိသည်။ AvaTrade သည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ပမာဏ အများအပြားကို မျက်နှာစာများစွာတွင် ဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာရန် လိုအပ်သော နည်းလမ်းဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
အသုံးပြုသူများသည် AvaTrade တွင် အဘယ်အရာ ရောင်းဝယ်နိုင်သနည်း။
နှင့် AvaTrade သုံးစွဲသူများသည် မတူညီသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာမျိုးစုံကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် စတော့ရှယ်ယာများ၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ ETFs (လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးရန်ပုံငွေများ)၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ရွေးချယ်စရာများနှင့် ငွေချေးစာချုပ်များ ပါဝင်သည်။
Canada တွင် မရရှိနိုင်သော်လည်း၊ AvaTrade သည် သင့်အား အတိုးအကျယ် 100:1 အထိ ဖြင့် အနည်းဆုံး $20 မှ cryptocurrencies ကို ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများသည် အရှည် သို့မဟုတ် အတိုချုံ့နိုင်မှုဖြင့် အဆင့်အမြင့်ဆုံး cryptocurrencies အချို့ကို တစ်ရက်လျှင် 24 နာရီ ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာစျေးနှုန်းများကျဆင်းလျှင်သင်အမြတ်ရနိုင်ချေရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်သင် CFDs ကိုမပံ့ပိုးသောသမားရိုးကျ cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင်ရောင်းဝယ်လျှင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ထို့အပြင်၊ ငွေလဲလှယ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်၊ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဟက်ကာ သို့မဟုတ် ခိုးယူခြင်းအန္တရာယ် မရှိပါ။ တကယ်တော့၊ AvaTrade ဖြင့်၊ သင်သည် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ကိုရရှိရန် အခက်တွေ့နေစရာမလိုပါ။ အရာအားလုံးကို CFD တူရိယာများမှတစ်ဆင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စေပါသည်။
Bitcoin သည်လူအများစုကြားဖူးသော cryptocurrency ဖြစ်သော်လည်း AvaTrade သည်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများစုပုံပေးသည်။
AvaTrade ငွေကြေးအတွဲ 50 ကျော်ကို ပေးသည်။ ၎င်းတွင် မေဂျာများ၊ အသေးအမွှားများနှင့် ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများ ပါဝင်သည်။
ESMA စည်းမျဉ်းများကြောင့် AvaTrade သည်တူရိယာအမျိုးအစားတိုင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွင်ပါ ၀ င်မှုပမာဏကိုကန့်သတ်ထားရမည်။ ငွေကြေးအတွဲများကိစ္စတွင်၊ သင်သည် လက်လီဖောက်သည်ဖြစ်လျှင် ၎င်းသည် 1:30 တွင်ရပ်သည်။ သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုန်သည်တစ်ဦးဟု မှတ်ယူပါက ပမာဏသည် သိသိသာသာ မြင့်မားလာမည်ဖြစ်သည်။
စတော့ရှယ်ယာများသည်မင်းအရာထက်ပိုများနေလျှင် AvaTrade သည်တူရိယာအစုအဝေးများကိုသုံးခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များစွာကိုလွှမ်းမိုးသည်။
AvaTrade ရှိပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအားလုံးနှင့်ဆိုင်သည်နှင့်အညီပွဲစားကသင့်အားရှည် (သို့) တိုသွားစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုတန်ဖိုးကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သောဖြစ်ရပ်၌သင်အမြတ်ရနိုင်သည်။
AvaTrade အရောင်းအ၀ယ် ရာထူးများကို ဝင်ရောက်ရန် စီစဉ်နေပါက လည်း အသုံးဝင်သည်။ ကုန်စည်. ၎င်းတွင် သာမာန်ပူဇော်သက္ကာများ ပါဝင်သည်။ ရှေ, ငှေ, ဆီ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ပိုပြီး။
ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ AvaTrade မတူညီသောငွေကြေးအတွဲ 50 ကျော်တွင် 'vanilla' ရွေးချယ်မှုများ (သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ) အပြင် ရွှေနှင့် ငွေ။
AvaTrade တွင် ရောင်းဝယ်နိုင်သော အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ပါဝင်သည်။ ETFs၊ ငွေချေးစာချုပ်များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် အနာဂတ်များ - အားလုံး၏ပုံစံဖြစ်သည်။ CFDs.
Trading Platform အမျိုးအစားများ
ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာ AvaTrade အရစ်ကျပြုလုပ်ပေးသည့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ကုန်သွယ်ရေးဝါရင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင်၊ သို့မဟုတ် သင့်ဘ၀တွင် တစ်ခါမျှ အရောင်းအ၀ယ်မလုပ်ဖူးသည်ဖြစ်စေ - လူတိုင်းအတွက် တစ်စုံတစ်ခုရှိပါသည်။
AvaTradeGO အက်ပ်သည် သင်၏ desktop စက်၊ ပုံမှန် ဝဘ်ဘရောက်ဆာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်တွင် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည့် အလွန်အလိုလိုသိသာသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်းပလပ်ဖောင်းသည် သင့်အား သရုပ်ပြပစ္စည်းများအပါအဝင် အကောင့်အမျိုးမျိုးကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေပါသည်။
ဤမိုဘိုင်းအက်ပ်တွင် အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ သင်သည် 'စောင့်ကြည့်စာရင်းများ' ဖန်တီးနိုင်သည်၊ အရောင်းအ၀ယ်များကို လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ အော်ဒါမှာယူနိုင်သည်၊ ဇယားများနှင့် ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ သင့် desktop ပေါ်တွင် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအားလုံးကို AvaTradeGO မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှ သင်ယခုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အချို့နည်းပညာများကဲ့သို့စျေးကွက်လမ်းကြောင်းများကြောင့် AvaTrade လူ ဦး ရေမှမည်သည့်လူမှုရေးအသိအမြင်ကိုမဆိုလျင်မြန်စွာစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်း၏တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာစက်မျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်အချို့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ဟုဆိုရပါမည်။
AvaTradeGo အက်ပ်အပြင်၊ AvaTrade သည် အပလီကေးရှင်း ၂ ခုကို ပေးသည်- AvaSocial နှင့် မင်္ဂလာပါ.
AvaSocial သည် လူမှုကုန်သွယ်မှုနည်းပညာတွင် စံအသစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ မိုဘိုင်းအက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ အကောင်းဆုံးသောကုန်သည်များ၏ ကုန်သွယ်မှုများကို လိုက်နာနိုင်ပြီး ကူးယူနိုင်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဉာဏ်ပညာကို အသုံးပြု၍ သင်၏ လမ်းညွှန်ဆရာများ သို့မဟုတ် အဖွဲ့များအား မေးခွန်းများမေးကာ အစွမ်းထက်သော ဗျူဟာအသစ်များကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ AvaSocial ဖြင့် သင်သည် တစ်ယောက်တည်း ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတော့မည်မဟုတ်ပါ။
AvaSocial နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကမ်းလှမ်းထားသည်။ FCA- ထိန်းချုပ်ထားသော Pelican ကုန်သွယ်မှု။
အကယ်၍ သင်သည် AvaOptions ကိုအသုံးပြုပါက၊ သင့်တွင် အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် အထင်ကြီးလောက်သော ရွေးချယ်စရာများ ရှိလိမ့်မည်-
FX နှင့် ရွေးချယ်မှုများကို အမြင်အာရုံဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုပါ။
ငွေကြေးအတွဲများနှင့် ရွှေ 40+ အတွက် လွှင့်စျေးနှုန်းများ။
စိတ်ကြိုက်ဇယားများမှ FX အရောင်းအ၀ယ်။
ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှု ဗျူဟာ ၁၃ ခုထဲမှ တစ်ခုခုကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
အန္တရာယ်ကို တိုင်းတာပြီး စီမံခန့်ခွဲပါ။
ကုန်သည်အများစုသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော MetaTrader ပလက်ဖောင်းကိုကြားဖူးလိမ့်မည်။ ၎င်း၏ကျော်ကြားမှုသည်ယခု AvaTrade အပါအ ၀ င်ယခုကဲ့သို့သောပွဲစားများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိနေခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်၏ desktop ကွန်ပျူတာ၊ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်း၊ သို့မဟုတ်သင်၏ web browser တွင်သုံးနိုင်သည်။ MT4 ဆော့ဝဲရဲ့ဘယ်လောက်ပေါ့ပါးမှုကြောင့်မဆိုကတိမတည်ပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ AvaTrade ရှိ MT4 သည် ဆိုင်းငံ့ထားသောအမှာစာများ၊ ရိုးရှင်းသောအမှာစာများလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဇယားကွက်အများအပြား၊ နောက်လိုက်နေသည့်ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့သော အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အလိုအလျောက် software ကို
အထက်ဖော်ပြပါပလက်ဖောင်းများ၏ထိပ်တွင် AvaTrade သည်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေးဆော့ဝဲများလည်းပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတိုင်းအတွက်တစ်စုံတစ်ခုရှိသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်း အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အော်တိုကုန်သွယ် MT4 မှတဆင့်စနစ်များ ၎င်းကိုဖွင့်နိုင်သော Ava AutoTrader စနစ်ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားသင့်သည် algorithmic ကုန်သွယ်.
forex ပလပ်ဖောင်းများပေါ်တွင် - AvaTrade တွင် သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည့် API အများအပြား (Application Programming Interfaces) ရှိပါသည်။ သင် Forex အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် သင့်အား စိတ်ကြိုက်အလိုအလျှောက် အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်များအား အတုခိုးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ကုန်သည်များထံကမ်းလှမ်းသော အကောင့်အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် သရုပ်ပြအကောင့်များနှင့် စံနှုန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြားဖော်ပြရန် နှစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။
ပုံမှန်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်သည်နှင့်အမျှသင်၏ credit card ကိုသုံးလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်သင်တစ်ခုဖွင့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘဏ်လွှဲပြောင်းမှုကိုသုံးရန်အစီအစဉ်ရှိလျှင်သင်၏အကောင့်ဖွင့်ရန်ဒေါ်လာ ၅၀၀ လိုအပ်လိမ့်မည်။
သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်ခြင်း။ AvaTrade လုံးဝမကုန်ကျပါဘူး။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရန် $ 100,000 တန်ကြေးရှိသောစက္ကူရန်ပုံငွေများရရှိလိမ့်မည်။
Learn2Trade မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပွဲစား၏ပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုရန် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသည့် တူရိယာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်၏ ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်စေမည့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Professional Accounts များ
တစ်ခုဖွင့်ရင် AvaTrade ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကောင့်၊ သင့်အား ESMA ကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍ သုံးစွဲနိုင်မှုကို ကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် FX အတွဲများ၏ 1:400 အထိ၊ နှင့် သီးခြား cryptocurrencies တွင် 1:25 အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
'Ava professional' အကောင့်ဖွင့်ရန် လိုအပ်သော စံသတ်မှတ်ချက် သုံးမျိုးရှိသည်။ အနည်းဆုံး သူတို့နှစ်ယောက်ကို တွေ့ရမယ်။ ၎င်းတွင်-
မင်းရဲ့ငွေရေးကြေးရေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ငွေသားနဲ့ငွေကြေးတူရိယာနှစ်ခုစလုံးမှာမင်းမှာဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိရမယ်။
လေးပုံတစ်ပုံတွင်အနည်းဆုံးလေးပုံတစ်ပုံအရောင်းအဝယ်အနည်းဆုံး ၁၀ ခုရှိသည်။
ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုကဏ္inတွင်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိရမည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် AvaTrade ၏ 'MAM အကောင့်များ' (Multi Account Manager) ရှိသည်။ ဤသည်အပါအ ၀ င်ဖောက်သည်များအတွက်အကောင့်အမျိုးမျိုးကိုစီမံရန်လိုလားသောကုန်သည်များအားဖွင့်ပေးသည်။
ကန့်သတ်ချက်များ၊ ပိတ်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ခြင်း စသည်တို့ကဲ့သို့သော MT4 မှာယူမှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
EA ၏ (ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများ) နှင့် လိုက်ဖက်သည်။
0.01 အများကြီးမှ ဖောက်သည်ခွဲဝေပေးသည်။
အကန့်အသတ်မရှိ သုံးစွဲသူ အကောင့် မှာယူမှု နေရာချထားခြင်း။
မာစတာအကောင့်ကို ပိတ်ဆို့ရန် အမိန့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့် စံအကောင့်များအပြင် AvaTrade သည် အစ္စလာမ့်အကောင့်များဟု ခေါ်သော 'လဲလှယ်ခြင်းအခမဲ့' အကောင့်များကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
ဤငွေစာရင်းများသည်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက်နောက်လိုက်များအားထားရှိရန်နှင့်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေး၏အခြေခံမူများနှင့်အညီအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ အတိုးနှုန်းမပေးချေသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအကောင့်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် ဟလာလ် Sharia ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာသည်။
အစ္စလာမ့်အကောင့်များနှင့်မကိုက်ညီပါ cryptocurrency ကုန်သွယ်ဒါကြောင့် ဒါကို သတိထားပါ။ forex အတွဲများအတွက် ပျံ့နှံ့မှုသည် swap-free အကောင့်များတွင် တိုးလာသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ မဟုတ်ပါက AvaTrade သည် မည်သည့်ငွေမျှ မရရှိပါ။
AvaTrade ရှိ CFD Rollovers
CFD အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုသည် အခြေခံအားဖြင့် သင့်အား CFDs များကို အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ ရောင်းဝယ်နိုင်စေပါသည်။ စာချုပ်ဟောင်းမကုန်ခင် AvaTrade စာချုပ်ဟောင်းဈေးကို အသစ်စက်စက်နဲ့ လဲလှယ်မယ်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်၊ သင်၏ပွဲစားသည် သင်၏အရင်းခံစာချုပ်များကြားတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။ AvaTrade ဝဘ်စာမျက်နှာရှိ CFD အလှည့်အပြောင်းကဏ္ဍကို စစ်ဆေးပါက၊ စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် လာမည့် CFD 'အနာဂတ်' ကို ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင် CFD rollover page တွင်ရှိနေလျှင်အောက်ပါကဲ့သို့အချက်အလက်များကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။
CFD လှည့်ကွက်ကို စိတ်မဝင်စားပါက စိတ်မပူပါနှင့်။ လှည့်ပြန်ရက်စွဲမရောက်မီ သင့်ရာထူးကို သင်ပိတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ မလုပ်ပါက နေ့ချင်းညချင်း ထောက်ပံ့ကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
AvaTrade သင့်အား သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းရန် အပြင်တွင် လူသိအများဆုံး အော်ဒါအမျိုးအစားများကြားတွင် သင့်အား ရွေးချယ်နိုင်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ MT4 သည် သင့်လက်ချောင်းထိပ်တွင် လူကြိုက်အများဆုံး ကုန်သွယ်မှုအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် AvaTrade မှပေးဆောင်သော ပင်မဝဘ်အခြေခံပလပ်ဖောင်းမှာလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်ထည့်သွင်းသည့်အမှာစာစျေးနှုန်းရောက်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး သင်သည် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုထုတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ရာထူးဖွင့်သည့်နေရာတွင် မှာယူမှုကိုရပ်တန့်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်၊ စျေးကွက်အမှာစာတစ်ခုတင်ခြင်းဖြင့် သင်ချက်ချင်းရောင်းချရန် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒါဆိုရင်မင်းမှာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အနာဂတ်စျေးနှုန်းနဲ့မင်းရဲ့ရာထူးကိုလုပ်ဆောင်ပေးမယ့် 'entry orders' တွေရှိတယ်။ စျေးနှုန်းကိုရောက်ပြီးမှသာဒီအနေအထားကရှင်သန်သွားမှာပါ။ အခြားအမိန့်တစ်ခုစတင်သောအခါအလိုအလျောက်ဖျက်သိမ်းသောအမိန့်ကိုသင်သုံးရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများ (EAs) သည် သင့်အား လက်ဖရီးဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည့် ပရိုဂရမ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတွင် MT4 ၏ လူကြိုက်များသော အလိုအလျောက် ကုန်သွယ်မှုအင်္ဂါရပ် ပါဝင်သည်။ ဤပရိုဂရမ်များကို သင်ကိုယ်တိုင် ဝယ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖန်တီးနိုင်သည်။
Trading Tools များရနိုင်သည်
ဝဘ်ဆိုက်၏ 'ကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်' ကဏ္ဍတွင် သင့်အနေဖြင့် ရနိုင်သော ကုန်သွယ်မှုကိရိယာများစွာရှိသည်။ AvaTrade ဖောက်သည်များသည် ဤကိရိယာများကို အလွန်အသုံးတည့်သည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ နာမည်ကြီး tool တစ်ခုကတော့ AutoChartist ပါ။ ၎င်းသည် MT4 ကို အသုံးပြု၍ ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများတည်ဆောက်ရန်ယနေ့ဈေးကွက်များကိုအဆက်မပြတ် scan လုပ်လိမ့်မည်။
AutoChartist သည် အားတက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးသော ကုန်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ချေများကိုရှာဖွေရန် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသိအမှတ်ပြုအင်ဂျင်များကိုအသုံးပြုသည်။ ငွေရေးကြေးရေးတူရိယာများ၏ စျေးနှုန်းသည် မည်ကဲ့သို့ရွေ့မည်ကို သင်လည်း ခန့်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာသည် သင့်အား ပေးဆောင်သည်-
Fibonacci ပုံစံ အသိအမှတ်ပြုမှု။
AvaTrade သည်အတော်လေးအဆင်ပြေသောကုန်သွယ်မှုအနေအထားဂဏန်းတွက်စက်ကိုပေးသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်အရောင်းအ ၀ ယ်မလုပ်မီအလားအလာရှိသောကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်အမြတ်များကိုအကဲဖြတ်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။
သင့်အကောင့်၏ငွေကြေးသည် (ဆိုလိုသည်မှာ USD) ဖြစ်သည်။
ဝယ်သည် သို့မဟုတ် ရောင်းသည် (ဒါက မင်းရဲ့ အမိန့်)။
ရွေးချယ်မှုပလပ်ဖောင်း (ဥပမာ MT4)။
AvaTrade cryptocurrencies၊ ရွေးချယ်စရာများ၊ FX၊ စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ETFs နှင့် ငွေချေးစာချုပ်များကဲ့သို့သော ပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားတစ်ခုစီ၏ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေပါသည်။
နေ့ချင်းညချင်း အတိုး (နေ့စဉ်) ရောင်းပြီး ဝယ်သည်။
ပွဲစားအများစုကဲ့သို့ပင် AvaTrade တွင် စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်ကောင်းတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ အမည်၊ ရက်စွဲနှင့် အချိန်အပြင် ခန့်မှန်းထားသည့်ရလဒ်ကို သင့်အား အသိပေးမည်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ AvaTrade တွင် '၀ င်ငွေထုတ်ပြန်ချက်များ' ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ ၀ င်ငွေကိုကြေညာဖွယ်ရှိတဲ့အခါဒါကမင်းကိုပြောလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကအရေးကြီးတာကသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီရဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကို သင်ယူနိုင်စေရန်အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်မျိုးစုံကို ရှာဖွေနေပါက သို့မဟုတ် သင့်တွင်ရှိပြီးသား အရည်အချင်းများကို ပေါင်းထည့်လိုက်ပါ။ AvaTrade စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
AvaTrade သည် သုံးစွဲသူများအား ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ၊ forex e-books၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုကျူတိုရီရယ်များစွာကိုပင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သင်ကြားပြသပေးပါသည်။
အစပြုသူများအတွက်ကုန်သွယ်မှုကဏ္ section အောက်တွင်သင်တစ်ယောက်တည်းတွေ့လိမ့်မည်။
ပျမ်းမျှ Forex ဗျူဟာရွေ့လျားခြင်း။
ပညာပေးကဏ္ '' ကုန်သွယ်မှုအချက်အလက် 'တွင်သင်သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုအတွင်းကျကျမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နည်းပညာလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလေ့လာရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် - သင်တန်းသည်အောင်မြင်သောကုန်သည်ဖြစ်ခြင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
AvaTrade ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုစီကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီး ၎င်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး မည်သည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးအစားကို အသုံးပြုသင့်သည်ကို သင့်အား အသိပေးပါ။ မည်သည့်နေရာတွင် စတင်ရမည်ကို မသိပါက၊ AvaTrade သည် ၎င်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
At AvaTradeUK နှင့် ဥရောပ လက်လီကုန်သည်များသည် ESMA မှ ချမှတ်ထားသော လွှမ်းမိုးမှုကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။
အဓိကငွေကြေးအတွဲများ Leverage cap 30:1။
ရွှေ၊ အဓိကငွေကြေးအတွဲများနှင့်အဓိကညွှန်းကိန်းများ Leverage cap 20:1။
ရွှေမဟုတ်သောကုန်စည်များနှင့်အဓိကမညီမျှသောအညွှန်းကိန်းများ Leverage cap 10:1။
အခြားရည်ညွှန်းတန်ဖိုးများနှင့်တစ် ဦး ချင်းရှယ်ယာများ Leverage cap 5:1။
Cryptocurrencies- Leverage cap 2:1။
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် UK/EU မဟုတ်သောကုန်သည်များသည်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောကန့်သတ်ချက်များကိုရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသော AvaTrade တွင် ၁: ၄၀၀ အထိမြင့်နိုင်သည်။
သင်သည် ကုန်သွယ်မှုအသစ်ဖြစ်လျှင် CFD ကုန်သွယ်မှုဖြင့် သြဇာအာဏာကို အသုံးပြုခြင်းအား မထောက်ခံပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်မစတင်မီ စျေးကွက်များ မည်သို့လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် အိမ်စာများကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် AvaTrade တွင် သင့်အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
အမှုအခင်းအများစုတွင်၊ AvaTrade သင့်အား မည်သည့်ကော်မရှင်ခမျှ မကောက်ခံပါ။ အဲဒီအစား၊ သူတို့ဟာ ပြန့်ပွားမှုကနေ သူတို့ရဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ရရမယ်။ AvaTrade ၏ပျံ့နှံ့မှုသည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဤထက် ပို၍ လျှော့ချရန်အဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့် AvaTrade သည်မကြာသေးမီက crypto အရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်ပျံ့နှံ့မှုကို ၅၀%လျှော့ချခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် AvaTrade ကဲ့သို့ပွဲစားများသည်စျေးကွက်အတွင်းငွေရေးကြေးရေး၌ပိုမိုစိတ်ချရသောအခါသူတို့သည်သူတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ပြန့်ပွားမှုများကိုပိုမိုရက်ရောနိုင်ကြသည်။
AvaTrade စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် အလွန်အပြိုင်အဆိုင်ပျံ့နှံ့မှုများကို ပေးဆောင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ကုန်သွယ်မှုအတွက် ကော်မရှင်ခများမရှိပါ။ စောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ ပွဲစားတွေက ဖြန့်ကြက်မှုကနေ အမြတ်ထွက်တယ်။
လှုပ်ရှားမှုမရှိသောအခကြေးငွေသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် အပြာရောင်လတွင် တစ်ကြိမ်သာ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါက၊ သင့်အကောင့်ကို3လအပြည့်အသုံးမပြုပါက AvaTrade သည် သင့်အား 'လှုပ်ရှားမှုမရှိသောအခကြေးငွေ' ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဒါက 50 ယူနစ်။
၎င်းကို လှုပ်ရှားမှုမရှိသည့်ကာလတစ်ခုစီအတွက် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ငွေကြေးဖြင့်မဆို (GBP၊ EUR သို့မဟုတ် USD) ဖြင့် အမြဲကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
ပိုကြီးတဲ့အတွဲတွေကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိသူတွေအတွက် AvaTrade ကအကျိုးကျေးဇူးများစွာပေးထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် AvaSelect သည်ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် VIP ကုန်သည်များ. အကယ်၍ သင်သည် ဤပရိုဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါက၊ သင်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ AvaSelect သည် အပ်ငွေ 100,000 ယူနစ် (GBP၊ EUR၊ သို့မဟုတ် AUD) သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း ယူနစ် သန်း 100 ရှိသော ကုန်သွယ်မှုများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
အကောင့်ဖွင့်ခြင်း။ AvaTrade အရမ်းလွယ်တယ် သင်လုပ်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးမှာပွဲစား၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပြီးလျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံနှင့်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်အမျိုးသားအခွန်နံပါတ်တို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
ထို့နောက်သင်၏အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤအရာသည် AvaTrade အားသင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူကိုပို့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက်သင်၏လိပ်စာအထောက်အထားကိုပုံမှန်အားဖြင့်အသုံး ၀ င်ငွေတောင်းခံလွှာ (သို့) သင်၏နာမည်နှင့်လိပ်စာပါရှိသောတရားဝင်စာ (နောက်ဆုံး ၆ လအတွင်း) ပါ ၀ င်သည်။
ထို့နောက်တွင်၊ သင်သည် အတည်ပြုချက်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အကောင့်ထဲသို့ ရန်ပုံငွေများ အပ်နှံနိုင်ပြီး ကုန်သွယ်မှုစတင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကော်ပိုရိတ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ရှာဖွေနေပါကသင်ကဲ့သို့အရာများပေးရန်လည်းလိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ရှယ်ယာရှင်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်းလက်မှတ်နှင့်စာချွန်လွှာ
ငါတို့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း AvaTrade ကအမေရိကန်ကဖောက်သည်တွေကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းတို့သည်ထိုနိုင်ငံတွင်စည်းကမ်းမ ၀ င်သောကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ပါ။
On AvaTrade သင့်အတွက် ရွေးချယ်ရန် အပ်ငွေရွေးချယ်စရာများ ကောင်းသောရွေးချယ်မှုရှိပါသည်။
Mastercard နှင့် Visa ကဲ့သို့သော ခရက်ဒစ်ကတ်များ။
အစရှိတဲ့ e-wallet တွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါ။ NetellerWebMoney၊ Skrillနှင့် PayPal က.
သင်သည် အီးယူ သို့မဟုတ် သြစတြေးလျတွင် ရှိနေပါက၊ မည်သည့် e-wallet ရွေးချယ်မှုများဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်မည်ကို သတိပြုပါ။ သင်သည် Canada တွင်ရှိနေပါက၊ သင်သည် အကြွေးဝယ်ကတ်မှတစ်ဆင့် သင်၏အပ်ငွေကို မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
ဒက်ဘစ်ကဒ်/ဒစ်ဂျစ်တယ်ကတ်သုံးရန်သင်၏ကတ်၏အရောင်မိတ္တူတစ်ခုကိုလည်းသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏နာမည်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲနှင့်ကဒ်၏ပထမဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးဂဏန်းလေးလုံးကိုဖတ်ရန်သေချာပါစေ။ သင့်ကဒ်၏ရှေ့နှင့်နောက်ကျောနှစ်ခုလုံးကိုထည့်ရမည်၊ သို့သော်သင်မပို့မီဂဏန်း ၃ လုံးပါသောလုံခြုံရေးကုဒ် (CVV) ကိုဖုံးထားသင့်သည်။
သင်၏အပ်ငွေမည်မျှကြာမည်ကိုပြောသောအခါ၊ သင်သုံးသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Debit/credit card များသည်ချက်ချင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏ပထမဆုံးငွေသွင်းမှုဖြစ်လျှင်သင်၏အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သောကြောင့် ၂၄ နာရီကြာသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း (wire transfer) သည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို7ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ ဤအရာသည်သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်လျှင်သင်၏လွှဲပြောင်းမှုကိုခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ AvaTrade အားသင်၏ swift code (သို့) ပြေစာပေးခြင်းဖြင့်ဤအရာကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။
AvaTrade အကောင့်ဖွင့်ရန်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကို ပြော၍ AvaTrade သည်သင်၏အခြေခံငွေကြေးမည်မျှအနည်းဆုံး ၁၀၀၀-၂၀၀၀ ဖြင့်စတင်ရန်အကြံပြုသည်။
AvaTrade တွင်ငွေသွင်းရန်သင်လုပ်ရမည့်အရာသည် login ၀ င်ပါ၊ ငွေသွင်းမှုအပိုင်းသို့ သွား၍ သင်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ငွေထုတ်ခြင်းများ ကြုံလာသောအခါတွင်၊ AvaTradeသင့်အကောင့်ကို ဦးစွာအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကောင့်စစ်ဆေးခြင်းပြီးနောက်၊ AvaTrade ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ငွေထုတ်သည့်စာမျက်နှာကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပြီး ဖောင်ဖြည့်ပါ။ သင့်ငွေထုတ်ရန် တောင်းဆိုချက်ကို 24 နာရီအတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု အများအားဖြင့် မျှော်လင့်နိုင်သည်။
တရားဝင်ပွဲစားများအားလုံးနှင့် ပတ်သက်သည့်အတိုင်း AvaTrade သည် တင်းကျပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသည်။ ၎င်းသည် သင့်အကောင့်ကို ငွေသွင်းရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် တူညီသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ သင့်ငွေများကို ထုတ်ယူရန် လိုအပ်သည်ဟုလည်း ဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ debit ကဒ်ကို သုံး၍ သင်၏အကောင့်ကိုပထမဆုံးငွေသွင်းလျှင်၊ သင်ထုတ်ယူရန်တူညီသော debit ကဒ်ကိုလည်းသုံးရမည်။ ဒက်ဘစ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ငွေများထုတ်ယူရန်ကွဲပြားသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုကိုမရွေးချယ်မီသင်၏အပ်ငွေ၏ ၂၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသင်၏ကန ဦး ကတ်တွင်ရွေးချယ်ပါ။
အများအားဖြင့်၊ အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ သင့်ရန်ပုံငွေများကို အလုပ်ချိန် တစ်ရက်အတွင်း သင့်ထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဒက်ဘစ်နှင့် ခရက်ဒစ်ကတ်များတွင်၊ သင်၏ငွေထုတ်သည် အလုပ်ချိန်ငါးရက်အထိ ကြာနိုင်သည်။
သင်မည်သည့်ဘဏ်ကိုအသုံးပြုသည်၊ သင်အမှန်တကယ်နေထိုင်သောနိုင်ငံပေါ်မူတည်သည်။ ဘဏ်ငွေလွှဲထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုချက်များသည်ရောက်ရန် ၁၀ ရက်အလုပ်လုပ်ရန်ကြာနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် Ava debit MasterCard ကိုသုံးခြင်းသည်သင်၏ငွေကိုအမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သင်စာရင်းပေးပြီးသောအခါဤအရာများထဲမှတစ်ခုကိုသင်အမြဲလျှောက်ထားနိုင်သည်။
သင် AvaTrade တွင်အကူအညီတစ်စုံတစ်ရာလိုအပ်ပါက ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင် 'တိုက်ရိုက်စကားပြော' ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ ယင်း၏ညာဘက်တွင် အနည်းငယ်၊ သင်တည်ရှိသည့်နေရာနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု ရှိလိမ့်မည်။
AvaTrade ရှိ အကူအညီပေးရေးစင်တာ စာမျက်နှာသည် အိတ်ကပ်များဖြင့် ခြားထားသော FAQs များဖြင့် အတော်လေး နက်နဲပါသည်။ အချို့သောကုန်သည်များသည် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ FAQs စာမျက်နှာသို့ လင့်ခ်တစ်ခုရှာဖွေရာတွင် အခက်အခဲရှိကြောင်း တင်ပြကြသော်လည်း၊
AvaTrade ကြိုဆိုသောဘောနပ်စ်များကို အခါအားလျော်စွာ ကမ်းလှမ်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ယခုလေးတင်ပါဝင်ပြီး တစ်ခုမှမရရှိခဲ့ပါက၊ သင်သည် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းရှိမရှိကို သိရှိနိုင်ရန် သင့်အကောင့်မန်နေဂျာထံ ပြောဆိုရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
သင့်လက်ထဲသို့ မရောက်ရှိမီ ပထမ6လ (သင်ငွေသွင်းပြီးကတည်းက) တိကျသော ကုန်သွယ်မှုပစ်မှတ်ကို ထိမှန်ရန် လိုအပ်သည်ဟု အများအားဖြင့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ဆုငှေ.
UK ဖောက်သည်များအတွက် လောင်းကစားဖြန့်ကြက်မှု။
အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ပြီး ယုံကြည်ရသော ပွဲစား။
အချို့အချိန်များတွင် အလုပ်ချိန် ၅ ရက်အထိ နှေးကွေးသော ငွေထုတ်ချိန်။
စတင်သူများအတွက် တည်ဆောက်ထားသည့် AvaProtect ၏ အချက်အလက်များဖြင့် PRO
AvaTrade ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရွေးချယ်နိုင်သော တူရိယာအမြောက်အမြားရှိပြီး ပလပ်ဖောင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် သင့်ကုန်သွယ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
crypto ကုန်သွယ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် တင်းကျပ်စွာ ဖြန့်ကျက်ထားသော အွန်လိုင်းပွဲစားများစွာမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် AvaTrade ၏မျက်နှာသာ၌ ကျိန်းသေအလုပ်လုပ်ပါသည်။ AvaTrace သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးက လွှမ်းခြုံထားသော စည်းမျဉ်းပမာဏသည် ဆိုးရွားသည့်အရာမဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
အမြဲလိုလို၊ သင်သည် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူမဟုတ်သော်လည်း AvaTrade ကို အမှန်တကယ်အားပေးလိုပါက - ငွေအစစ်အမှန်ဖြင့် မဝင်မီ ဒီမိုအကောင့်တစ်ခု၏ အပြည့်အဝအားသာချက်ကို ရယူလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင် AvaTrade သည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ သို့သော်ပွဲစား၏ထူးခြားသောအချက်များထဲမှတစ်ခုမှာလိုက်လျောညီထွေမှုအတွက်၎င်း၏ကျော်ကြားသောဂုဏ်သတင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လုံခြုံပြီးလုံခြုံသောအွန်လိုင်း ၀ န်းကျင်တွင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေသည်မှာသေချာနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ VIP Signals များကို တစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့်ရရန် Avatrade ဖြင့် $250 အပ်နှံလိုက်ပါ။
MT4 ကို Leverage ၁ မှ ၅၀၀ အထိဖြင့်ရောင်းဝယ်ပါ။ MT4 ကို Leverage ၁ မှ ၅၀၀ အထိဖြင့်ရောင်းဝယ်ပါ။